5-ta barnaamij ee ugu fiican Android ee lagu raacayo kubbadda cagta Dukaanka Play | Androidsis
5-ta barnaamij ee ugu fiican Android ee laga raacayo kubbadda Play Store
Haaruun Rivas | | Codsiyada Android
Waan ognahay taas kubada cagta waa mid ka mid ah isboortiga ugu muhiimsan adduunka. Haddii aad taageere u tahay kooxaha sida Real Madrid, Barcelona, ​​Chelsea, Bayern Munich ama kooxo kale iyo horyaallo kala duwan oo adduunka ah, waxaad u baahan doontaa inaad mar walba ka warqabto dhacdo kasta.
Waxaa jira codsiyo badan oo ka socda Play Store oo aan ku raaci lahayn kooxdayada aan ugu jecel nahay, qaar aad ufiican iyo kuwa kale oo ubaahan in lahorumariyo. Codsiyadaani waxay ku siinayaan dhammaan macluumaadka ku saabsan ciyaar kasta, hadaf kasta iyo dhacdo kasta oo khuseysa.
Haddii aad raadineyso codsi inaad raacdo kooxda aad jeceshahay, laakiin aadan weli go'aansan midka aad ku rakibayso taleefankaaga Android, halkan waa kuwa ugu fiican.
Kadib Waxaan kuu soo bandhigeynaa 5-ta codsi ee ugu fiican si aad ula socoto ciyaaraha kubbadda cagta ee laga heli karo Play Store iyagoo leh xiriiriyaashooda.
Aan aadno halkaas
2 Wararka Kubadda Cagta - Kubadda Cagta
4 90min - Soccer App
5 Natiijooyinka Kubadda Cagta
Haddii aad rabto inaad kubbada cagta si toos ah uga daawato moobilkaaga, TV -gaaga ama aalad kasta oo kale, hadda waxaad ku tijaabin kartaa 1 bil oo bilaash ah laga soo xigtay.
Wararka Kubadda Cagta - Kubadda Cagta
Soccer News - Onefootball, waa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee lagu raaco cayaaraha kubada cagta dhammaan Dukaanka Play-ka.
Waxay ku siineysaa ciyaaro toos ah, safafka, soo koobidyada, cusbooneysiinta wararka iyo inbadan oo koox walba iyo horyaal kasta ah, waxaa sii dheer fursada ah in la raaco horyaalada ugu muhiimsan ee wadan walba, ciyaarba ciyaar.
Waxaad dooran kartaa naadiga kubadda cagta ee aad ugu jeceshahay iyo kooxda caalamiga ah ee aad dooratay, iyadoo mudnaan la siinayo kuwan marka loo eego wararka iyo cayaaraha. Intaas waxaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad xulato horyaalada aad ugu jeceshahay iyo kooxaha aad dooratay, si aad ula socotid waxyaabaha ku saabsan kulamada, saxiixyada iyo wararka muhiimka ah.
Dhibcaha tooska ah ee OneFootball
Developer: Hal-lugood Kubbadda GmbH
Shaki la'aan, Kubadda Cagta ee Forza Football waa barnaamij aad u fiican oo ku habboon la socoshada cayaaraha kubadda cagta leh ogeysiisyada la ogeysiin karo iyo digniinta ee codsigan uu ku siinayo adiga.
Waxaad awoodi doontaa inaad aragto natiijada tooska ah ee riwaayadaha ugu muhiimsan kulan kasta. Intaas waxaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad raacdo wax ka badan 420 horyaal oo adduunka ah, iyo sidoo kale koobab iyo ciyaaro saaxiibtinimo.
Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee dalabku ku siinayo waa fursad aad ku weydaarsato fikradaha iyo sawirrada ciyaar kasta taageerayaasha ka kala socda qaybaha kala duwan ee adduunka.
90min - Soccer App
Tani waa mid kale oo ka mid ah barnaamijyada ugu waa weyn adduunka.
Waxay ku siineysaa dhamaan wararka aduunka ee kubada cagta, sida xanta suuqa kala iibsiga, khilaafaadka, kala soocida iyo waxyaabo kale oo badan.
90min - Kubadda Cagta waxay ku siineysaa tirakoobka ugu dhameystiran ee ciyaar kasta oo toos ah. La soco ciyaar kasta meelkasta oo aad joogtid iyo wakhti kasta barnaamijkan cajiibka ah!
Waxay sidoo kale kuu haysaa, maqaallada wararka kubbadda cagta ugu fiican. Sidoo kale Waad la wadaagi kartaa wararka u muuqda kuwa adiga kugu habboon adoo adeegsanaya shabakadaha bulshada ee kala duwan sida Facebook, Twitter, iyo kuwa kale oo badan.
90min - Kubadda Cagta
Developer: Daqiiqad Media
Natiijooyinka Kubadda Cagta
Natiijooyinka Kubadda Cagta waxay gacanta kuu gelineysaa suurtagalnimada inaad si toos ah ula socotid in ka badan 10.000 oo tartan oo adduunka ah, iyo, sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay ku siineysaa ogeysiisyo la beddeli karo waqtiga cayaaraha oo ay la socdaan dhammaan macluumaadka kulan kasta.
Waxay leedahay falanqeyn aad u fiican, iyo tirakoobka ugu fiican ee ciyaar kasta sida xaddiga suurtagalka ah ee yoolalka, boqolkiiba guusha, iyo kuwa kale oo badan.
Kaliya kuma siineyso wararka adduunka kubada cagta, laakiin sidoo kale waxaad ka heleysaa ciyaaro kala duwan sida kubbadda koleyga, tennis, golf, baaskiil, triathlon, iyo ciyaaro badan oo caan ah.
Natiijooyinka Kubadda Cagta BeSoccer
FotMob waa codsi kale oo aad ufiican oo loogu talagalay taageerayaasha kubada cagta taasi waxay na siisaa ogeysiis waqti xaadirkaan, natiijooyinka tooska ah, digniinta iyo tirakoobka ciyaarta oo leh dhammaan macluumaadka saxda ah si loogu raaxeysto ciyaar kubbadda cagta oo xikmad weyn leh.
Waad raaci kartaa tartamada kala duwan sida La Liga (Liga Santander), Premier League, Champions League, Bundesliga, Serie A, iyo kuwa kale oo badan.
FotMob, waxay ku siineysaa wararka ugu muhiimsan ee ku saabsan kooxda aad jeceshahay iyo ciyaartoydaada. Raac, daqiiqad daqiiqad, ujeedooyinka, isbadalada, digniinta, iyo xogta laxiriira ciyaar kasta oo kubada cagta ah.
In kasta oo nooca bilaashka ahi ka kooban yahay xayeysiis, waad ku raaxeysan kartaa waxyaabaha ballaadhan ee ay tahay inay bixiso. Haddii aad rabto inaad ku iibsato nooca ad-bilaashka ah ogeysiisyada murugeeysan, waxaad ka iibsan kartaa arjiga gudahiisa.
FotMob - Natiijooyinka Kubadda Cagta
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 5-ta barnaamij ee ugu fiican Android ee laga raacayo kubbadda Play Store
Ciyaar xikmad leh dijo
Waad salaaman tihiin, barta ugu fiican ee si bilaash ah loogu daawado kubada cagta waa Wiseplay shaki la’aan. Waxaan u isticmaali jiray si aan u daawado kubada cagta sanado badan oo had iyo jeer way shaqeysaa. Waxaan kuu daayay meel wanaagsan oo aad ku liis garayso liisaska wiseplay ee muhiimka u ah App-ka Wiseplay inuu si sax ah u shaqeeyo.
Ku jawaab Wiseplay